Maraykanka oo jadwal amara u direy madaxda qaranka iyo eri loogu baaqay: WARBIXIN - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Maraykanka oo jadwal amara u direy madaxda qaranka iyo eri loogu baaqay: WARBIXIN
Dawlada Somaliya kuma qasbana inay raacdo nidaam doorasho oo dibedda looga keenay ama tan gaalada ee asxaabaha ah oo keenta in ay soo baxaan dad aan u qalmin hogaaminta dalka. Dawlada Somaliya ayaa diyaarisay hanaanka doorasho ee ay rabto, waxase farogelin ku samaysay safaarada Maraykanka oo hadda la soo baxdey jadwal iyada u gaara.
” Waxaan u sheegaynaa madaxda dawlada dhexe inay si degdega ula kulanto SAAMILEYDA ayaa lagu sheegay qoraal uu saaray ninka Jabaanka ah ee Maraykanka u matala Somaliya. Hadalkan ayaa looga dan lahaa in lagu mijaxaabiyo hanaanka dawladnimo oo hadda ayna jirin waxa loogu yeero SAAMILEY.
Waxaan hore u sheegnay in sheekada maamul jufeedyada loogu talogalay meel qaranka laga soo galo oo ujeedadu tahay in dalku yeelan dawlad dhexe oo adag oo hanata xuduudaha dalka ayuu yiri Cali Calasow
”Waxaan dawlada Somaliya ugu baaqayaa in dalka laga saaro safiirka Maraykanka u fadhiya xerada Xalane ee magaalada Muqdisho ayuu yiri Cali Calasow. Wuxuu soo dhaafay kaalintiisa safiirnimo wuxuuna toos u farogeliyay siyaasada iyo hanaanka dawladnimo ee dalka.
Waxaas oo dhanba waxa noogu wacan dastuur dhoodhoobka gaalada u soo qortey dalka ee uu hirgeliyay fadhiid Sheekh Shariif ayuu raaciyay Cali Calasow.
Dawlada dhexe iyo barlamaanka ayay u taala qaabka doorasho ee dalku galayo umana taalo SAAMILEY waxa loogu yeero. Waxaan shaki ku jirin in qaska dalka yaala marka laga reebo dalalka aan ognahay ay kow ka yihiin Maraykanka iyo Ingiriiska.